Pikantsary Mikasika Ny Sivana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Novambra 2017 8:27 GMT
Fanamarihana: nivoaka tamin'ny volana jona 2006 ity lahatsoratra ity
Milaza ireo blaogera sinoa sasantsasany fa azo atao ny mametraka amin'ny toerany ireo blaogin'ny Habaka MSN amin'ny fiteny sinoa, amin'ny alalan'ny fampiasana ireo teny politika “voarara”. Mba hanazavana ny toedraharaha, nandramako napetraka tamin'ny toerany ny blaogiko amin'ny fiteny sinoa, izay tia ny fahalalahana. Nankany amin'ny rafitra fiampitàna ho amin'ny Habaka MSN sinoa aho, tao amin'ny : http://spaces.msn.com/?mkt=zh-cn, ary nanandrana namorona blaogy iray atao hoe 我爱言论自由人权和民主, izay midika hoe “Tiako ny fahafahana maneho hevitra, ny zon'olombelona, ary ny demokrasia.”
PIKANTSARY AMIN'NY ANTSIPIRIHANY:
Naharay hafatra milaza hadisoana toy izao manaraka izao aho: 您必须输入您的共享空间标题。标题不能包含禁止的语言，例如亵渎的语言。请键入一个不同的标题。Izay midika hoe: “Tsy maintsy mampiditra lohateny iray ianao ho an'ny habakao. Tsy azo asiana fiteny voarara ny lohateny, toy ny faniratsiràna. Azafady lohateny iray hafa omena.”
Mihevitra aho fa heverin'ny Microsoft ho faniratsiràna teny hoe “zon'olombelona”, “demokrasia” ary “fahalalahana”.
Afaka dinganiin’ireo torolalana Freedom Hack an'ny Bennet Haselton io sivana io. Amin'ny fampiasana ireo torolalana ireo, nahavita namorona blaogy sinoa aho nitondra ny lohateny hoe: “Tiako ny fahalalahana maneho hevitra, ny demokrasia ary ireo zon'olombelona”.
Portnoy avy ao Taïwan no nandika ireo torolalana ho amin'ny fiteny Sinoa.
FANAVAOZANA VAOVAO MISIMISY KOKOA:
Nilalao ilay blaogy fahalalahana sy demaokrasia aho, izay noforoniko avy amin'ny alalan'ireo torolalana fijirihana ary afaka namorona tsy nisy olana lahatsoratra maro misy lohateny ara-politika manohintohina, toy ny hoe: “aza adino ny 4 jona 1989″ sy ny hoe “Falungong” :
Araka izany, voafetra fotsiny ho an'ny lohatenin'ny blaogy ny fanivanan'ny MSN Space China. Toa tsy voasivana ireo lohateninà famoahan-dahatsoratra manokan'ny tsirairay ary toa tsy voasivana ny ao anatin'ny vataben'ny lahatsoratra.